Yeyda oo la ogaaday in qaab codeyn ah ay ku go'aan qaataan - BBC News Somali
Yeyda oo la ogaaday in qaab codeyn ah ay ku go'aan qaataan
Lahaanshaha sawirka DR NEWIL JORDAN, UNSW
Image caption Yey
Cilmi Baaris cusub oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in yeyda ay leeyihiin nidaam go'aan qaadasho ah oo la yaab leh, kagana duwanyihiin xayawaanka intiisa kale.
Daraasadan oo ay sameeyeen aqoonyahano ka kala socda jaamacaddaha New Wales ee magaalada Sydney ee Australia iyo jaamacadda Brown ee Maraykanka iyo waliba tan Swansea ee isla Maraykankan ayaa lagu ogaaday in yeyda ay qaab codbixin ah go'aanka u qaataan iyaga oo adeegsanaya hatishada. Go'aanada ayaa waxaa ka mid ah marka ay tahay in ay ugaarsi tagaan iyo marka kale.
Dr. King oo ka tirsan cilmi baarayaasha ayaa yiri "hatishada ayay u adeegsadaan qaab codbixin ah, haddii tiro go'an oo ay isla hatishoodaan, markaas waxaa dhacda in ay ku dhaqaaqaan ugaarsi".
"Waxaa jira guntan ama kooram loo baahanyahay, waxaana xitaa nidaamkan isticmaala noolayaasha kale qaarkood" ayuu intaas ku daray.
Cilmi Baarista ayaa sidoo kale muujisay in ay jiraan xubno ka tirsan yayda oo codkooda uu ka awood badanyahay kuwa kale, oo haddii ay hatishoodaan lagu go'aan qaadanayo.
Reena Walker oo ka tirsan jaamacadda Brown ayaa tiri "Marka kan labka ah ee ugu daaxuursan ama dhidigga ugu gaanjibosan ay ka qayb qaadanayaan codeynta, waxaa kaliya loo baahanyahay dhawr hatisho oo kaliya si go'aanka loogu dhaqaaqo, haddiise aysan ka mid ahayn waxaa loo baahanyahay hatisho intaas aad oga badan si loo talaabo qaado, qiyaastii illaa 10 hatisho".
Cilmi Baaristan ayaa waxaa lagu daabici doonaa majaladda seeyniska ee The Proceedings of the Royal Society B.
Nooca yayda daraasadda lagu sameeyay ayaa ah kuwa Afrika ku nool ee sii dabar go'aya, waxaana daraasadda laga sameeyay seero ku taala dalka Botswana , halkaas oo lagu illaaliyo yaydan si aysan u dabar go'in.
Inkasta oo ay jiraan xayawaano aad u badan oo leh nidaam iyo kala dambayn iyo waliba hoggaan, haddane waa markii koowaad oo la ogaado in aragtida dhexdooda ah oo codeynta ay ka mid tahay waxyaabaha la tixgaliyo.
Lahaanshaha sawirka DR ANDREW KING, SWANSEA UNI
Image caption Yeyda ayaa la ogaaday in qaab codeyn ah ay ku go'aan qaataan
•Waa xayawaanka aadka usii dabar go'aya ee adduunka
•Waxa laga helaa Afrika oo dhan
•Kuwa ugu badan waxaa laga helaa waddamada Afrikada Koonfireed iyo dalalka Tanzania iyo Mozambique
•Noolayaasha kale ee halista galiya waxaa ka mid ah libaaxa iyo bini'aadamka
•Marka ay yayda ugaarsanayno waxa ay ku dheeraysaa ilduufka , waana wax-dayacan-gaad
•Xiliga guga orod ahaan waxa uu xawaarahooda gaaraa 70km halkii saac.
'Qiimaha hilibka' dameeraha Kenya oo sare u kacay
Haramcadka oo halis ugu jira inuu cirib tirmo